भिक्षु भिक्षुनीरूले वाहन प्रयोग गर्न हुन्छ कि हुँदैन? | BodhiTv
25 - Jul - 2021
भिक्षु भिक्षुनीरूले वाहन प्रयोग गर्न हुन्छ कि हुँदैन?
यदाकदा सुनिने गरेको छ, पहेंलो चिवरवस्त्रका भिक्षु भिक्षुनीहरुले मोटर साईकल, स्कूटर, चारपाङ्ग्रे गाडीहरू प्रयोग गर्न थालेका छन्। यो शोभनीय भएन।वाहनलाई केको दृष्टिले हेर्छ, कुन उदेश्यले प्रयोग गरिन्छ, त्यसमा भर पर्ने कुरा हो यो।
भिक्षुभिक्षुनीहरू गृहस्थ त्याग गरी शील समाधि प्रज्ञाको प्रभावकारीरूपले यथेष्ट मात्रामा अभ्यास गरी छिटो निर्वाणमार्ग फेला पार्ने उदेश्यले अभिप्रेरित हुन्छन्।मोटर मोटरसाईकलको प्रयोग आवश्यक स्थानमा छिटो पुग्न प्रयोग गरिने साधन हुन्। कसैकसैले यी साधनहरूलाई विलासिताको साधनको रूपमा लिन्छन्। जुनबेला यस्ता वाहन प्रयोग गर्नेहरू थोरै थिए र विना वाहनका व्यक्तिहरु धेरै थिए, त्यसबेला यी वाहनहरू विलासिताको रूपमा हेरिन्थ्यो। वाहनमा सवार भएका व्यक्तिहरूले पनि आफूलाई विलासीताको उपभोग गरिरहेको ठान्थ्यो।मानिसहरुको सक्रियता पनि कम थियो त्यो बेला।
तर अहिले समयले कोल्टे फेरी सक्यो।मानिसहरू धेरै व्यस्त बन्न थाले। एउटी आमा आफ्नो बच्चालाई स्कूलमा पुर्‍याउन जान समयको बचतको लागि मात्र नभएर बच्चालाई स्कूलसम्म दिनदिनै हिंडाएर लान नमिल्ने, बच्चा त्यति हिंडाईको लागि समर्थ नभएको कारणले पनि स्कूटर चढ्न नसिकेको भए पनि पैसा र समय खर्चेर पनि स्कूटर सिकेर बच्चालाई स्कूल पुर्याउनु पर्ने भईरहेको छ। विलासिताको लागी भए आमाले त्यस्तो टन्टा गर्दैनथ्यो। त्यसरी नै भिक्षुभिक्षुनीहरू पनि एकै दिनमा धेरै ठाउँको कार्यक्रम भ्याउनु पर्ने, आफूले अध्ययन गर्न समय निकाल्नु पर्ने अवस्था रहेकोले सबै काम भ्याउन मोटर, मोटर साईकल, स्कूटर तथा गाडीहरु प्रयोग गर्नु पर्ने अवस्थामा पुगेका छन्। बाहन विना उहाँहरुको काम नचल्ने अवस्थामा छ।
एकपाली प्रसिद्ध पत्रकार विजय कुमार पाण्डेले आनी छोइङ्गलाई प्रश्न गर्नु भयो रे, “तपाई एकदम राम्रो गाडी चढेर हिंड्नु हुन्छ, के यो विलासी उपयोग होइन र? उहाँले जनताको आशय उहाँको सामु विसाई दिएको मात्र पनि हुन सक्छ, यसमा आनीले उपयुक्त जवाफ दिनुभयो होला। मैले यो देख्न सुन्न पाएको होइन। म यति महसूस गर्छु कि आनीलाई गाडीको प्रयोग अहिले अनिवार्य भईसकेको छ।गाडीको प्रयोग गरे धेरै ठाउँको कार्यक्रम भ्याउन सकिन्छ, अन्यथा एक ठाउँमा मात्र गएर सिमित हुन वाध्य हुनुपर्छ। उहाँको लागी गाडी उहाँको लागी मात्र होइन उहाँबाट लाभ प्राप्त गर्नेहरूको लागी पनि आवश्यक छ। अन्य भन्तेहरूले पनि गाडी, मोटरसाईकल प्रयोग गरेकोमा गुनासो सुनिन्छ। यो गुनासो अनावश्यक र अवाञ्छित हो। यस्तो गुनासो गर्न छाडौं। गाडीमा सवार भिक्षुभिक्षुनीहरुको सम्मान गर्न थालौं।भवतु सब्ब मंगलं।